SIDEE U QABATAA CUNUG WADANKA GUDIHIISA AH? - WARARKA
Cottage - meel cajiib ah!
Wadajir dadka waaweyn waxay ku raaxaystaan ​​dabeecadda iyo carruurteena.
Sidaa daraadeed ma aha mid caajis ah, waxaan soo bandhignaa dhowr fikrado ah oo ka dhigi doona xubnaha kale ee da'da yar ee qoyskaaga oo xiiso leh.
Caadi ahaan ma aha wax adag in dadka waaweyni u qoondeeyaan dhul yar oo beerta ilmo ah.
Sii isaga qalab amaan ah, waxaad siisaa xulasho ah miraha dhirta fudud, waxay xasuusinayaan waqtigii jaridda dhirta iyo waraabinta.
Wax yar ka dib shaqooyinka waa la abaalmarin doonaa. Cunuggu wuxuu qurxin karaa beerta marka ay suurtagal tahay.
Isku day inaad ka dhisto xayndaab xayawaan ah, ama jajabyo qoryaha leh qoryaha qolofta, ku rakibo boombalooyinka sida tirooyinka beerta, wax kasta!
Fikradda carruurta way ogyihiin wax xuduud ah. Sariir la'aan lacag la'aan ah - dhibaato ma leh Waxaa suurtagal ah in la buuxiyo weel kasta oo ka soo baaldi hore ilaa ukunta. Dhammaan tan waxa lagu qurxin karaa inay abuuraan oo ay ku raaxaystaan ​​fikradda asalka ah.
Shimbir daawashada waa hawl firfircoon oo faa'iido leh oo aan u baahnayn diyaargarow adag. Waxaad u baahan tahay laba shimbirood, bac ah oo abuur ah iyo sabir yar. Haddii gurigu leeyahay digaag - waa weynaa!
Ilmuhu ha ku shubo abuurka iyo iskudarka rooti ee qolka shimbirta, xusuuso, ama sawirro "booqdayaasha", iyo fiidkii eegi doono cidda soo gelisay xayawaanka, ka akhriso shimbirahaas shaxanka ama internetka.
Samee buug xusuusin sawiro ama sawiro. Waxaad ku sii wadi kartaa tirakoobka tirada shimbiraha iyo wakhtiga uu imaanayo si uu u quudiyo.
Dhamaan caruurta oo dhan ma dareemaan inay si aamusan u ilaalinayaan.
Loogu talagalay cayaaraha kalluumeysiga ugu firfircoon.
Ma doonayo inaan ku dhejiyo pin iyo qalalan. Waxaad ubaahan tahay inaad qabato shabaqa daboolka.
Haddii aad ku dhufato - waqtigaan, ku qabatay mid kale - tani waa laba!
Waxaad qabanqaabin kartaa tartan, adigoo qabta dhar midab leh oo midab gaar ah, samee miisaska rikoodhada, iyo inta u dhaxeysa kiisaska xusuus qor magacyada ilaha qurxintaas.
In badan oo ku haboon gabdhaha, laakiin, sida ficilku u muujiyo, wiilasha ayaa sidoo kale jecel inay bixiyaan ubaxyada hooyooyinka. Taasi waa wax weyn! U ogolow ilmaha inuu sameeyo bouquets ubaxyada duurjoogta ah, qurxin qolalka iyo balastar iyaga leh.
Sii carruurta carruurta qaata, sanduuq madhan waxay u adeegi doonaan miiska. Hadda waxaad furan kartaa dukaanka ubaxa. Goobtu waxay ku haboon tahay ma aha oo keliya bouquets, laakiin sidoo kale ubaxyo ubax, jijimooyin, silsilado.
Tuuladu waa meel, oo leh masalan sare, waxaad ka heli kartaa dhoobo dhoobo ah. Carruurtu waxay sameeyaan dheriyo, koobab, madadaalo, alaabo lagu ciyaaro.
Dhamaan lagama maarmaanka u ah diyaarinta dhoobada tayada leh. Maaha arrin muhiim ah. Nidaamka ugu muhiimsan!
Cuntada waa la qalajin karaa kariyaha qaboojinta ama qorraxda oo kaliya. Haddii aad soo qabato rinjiyeynta magaalada, waxay noqon doontaa mid xiiso badan. Waxyaabaha la dhammeeyey waxaa loo isticmaali karaa ciyaaraha, ama diyaarin bandhig.
Maxay noqon kartaa mid xiiso leh intii la qorsheyn lahaa oo la bilaabi lahaa diyaaradaha duulista?
Waxa laga yaabaa in lagu duubo warqad kasta, oo lagu rinjiyeeyo mid kasta oo midabyo ah isla markaana ku shaqeeya tiro kasta.
U diyaargarow tartamada saxsanaanta ama duulimaadka, u samee dib u eegida askari, furan hawada.
Ha iloobin in ciyaarta dhamaadka ciyaarta aad u baahan tahay inaad soo ururiso diyaaradaha. Ha u nuugin dabeecadda!
Haddii degaankaaga banaankiisa uu ka fog yahay deriska, markaa waxaa suurtagal ah in ilmaha loo oggolaado inuu horumariyo awoodiisa muusikada.
Isku dheji xadhig u dhexeeya laba geed, oo horay u dejiyey wax walba oo ku saabsan suurtagalka ah in laga soosaaro codka: digsi duug ah oo gaboobay, digsi, shaashado, gasacado, dhalooyin madhan.
Ilmahaaga u soo wareeji isweydaarsiga una wargeli inuu yahay muusik. Wakhti wakhti ah oo uu la socdo waxa uu yeelan doonaa rook farxadeed oo ah "qalabka muusiga." Haa, cod dheer, laakiin wuu jeclaan lahaa!
Haddii shaqada dhismuhu ay socoto dacha iyo waxaa jira sibidhka sibidhka, ka dibna tani waa hanti kaliya!
Buuxi xalka qadar badan oo ciid ah oo ku jira weel caag ah, ku dar waxyaabo kala duwan oo xiiso leh, sug ilaa inta ay adkeyneyso. Wax walba Xirmada dhagxaanta waa diyaar.
Sii carruurta jilicsan, burushyada rinjeerka hore iyo wax u shaqeyn karo sida qalab. Carruurtu waa mashquul, waalidiintu way degan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, xasuusnow in carruurta yaryar ee sida firfircooni ay u noqon karaan dhaawacyo.
Kubadda! Alaabta ciyaarta oo dhan marwalba.
Kubadda cagta, kubbadda laliska, kubbadda lakin ... Laakiin waxaa jira ciyaaro kubbadood oo yar.
Waxaan kuu soo bandhigayaa nooca summer ee bowling.
Dhalado yar oo faaruq ah oo balaastig ah ayaa badali doona biinanka, kubbada bowling waxay noqon doontaa kubad joogto ah.
Diyaarso sharootooyinka ku yaal waddada beerta oo ku raaxee ciyaarta!
Had iyo jeer ma ahan waddanku waa daruuri lagama maarmaanka u ah - maaha wax khatar ah. Iyadoo dhaqdhaqaaq yar oo ka mid ah sawirka, laamaha qalalan iyo jeexjeexyada waxay noqdaan naqshadeeye madadaalo leh.
Laga soo bilaabo waxaad ka dhisi kartaa guryaha, munaaradaha iyo xitaa dhamaan degaannada miyiga ah ee loogu talagalay dadka caashaqan ee ubaxa. Xasuuso sida loo sameeyo tubaako ka sameysan lugaha iyo løndag? Bar caruurta!